Waa maxay surimi maxaase ka samaysan? | Bezzia
Emilio Garcia | 13/01/2022 15:03 | La cusbooneysiiyay 14/01/2022 09:41 | Karinta, Guriga
Warshadaha cuntadu waxay had iyo jeer ku dadaalaan inay bixiyaan cuntooyinka kobciya cuntadeena si walba. Shelefyada Supermarket-ka ayaa leh badeecooyin cusub oo soo jiidasho leh, qaar laga keenay latitudes kale. Tusaale ahaan, soy, quinoa ama surimi Waxay ku dhammaystiraan cunnadayada Mediterranean-ka ee cajiibka ah oo leh hantidooda caafimaadka qabta. In aan awoodno in aan ogaanno kuwan iyo cuntooyinka kale oo lagu daro hab-nololeedkayada joogtada ah ayaa ka dhigaysa menu-keena mid aad u kala duwan oo dheellitiran marka loo eego nafaqooyinka. Kulaylka shooladda waxaa ka dhashay su'aalo sharci ah oo dhan: Waa maxay surimi maxaase ka samaysan?
1 waa maxay surimi
2 Guryaha surimi
3 Surimi iyo borotiin
waa maxay surimi
Guud ahaan, aad iyo aad ayaan ugu furannahay inaan tijaabino dhadhan cusub. Dhanka kale, tiro yar oo macaamiisha ah ayaan weli ku xisaabtamin faa'iidooyinka cunnada ay cunaan. Sababahan dartood, marka badeecad cusubi dhasho oo ay noqoto mid aad u muuqata. su'aalo badan ayaa ka dhasha waxyaabaha ku saabsan sifooyinka nafaqada. Inkastoo ay nala joogeen dhowr iyo toban sano, su'aasha waa maxay surimi weli furan. Dad badan, waxay horeba ugu noqotay badeecad caadi ah, oo lagu dhex arki karo suxuunta anaga oo kale sida saladhka badda ama skewers-ka rabitaanka cuntada ee Basque cunnada. Kuwa kale, waa badeecad sii socota inay u soo baxdo cusubideeda marka loo eego maaddooyinka caadiga ah ee cunnada Isbaanishka ee dhaqameed.
Sida jiiska Manchego ama ham Iberian ee dhaqankeena gastronomic, surimi waa badeecad dhaqameed dhinaca kale ee adduunkeena. Asalkeeda awoowgeed waxay ku qotontaa wakhtiga, markii ay u soo baxday hab lagu ilaaliyo kalluunka. Sida tayada codka ee magaceeda tilmaamaya, asalkiisu waa Japan. ilaa kun sano ka hor macneheeduna waa “shiidan kalluunka shiidan”. Sababtan awgeed, la yaabka waddanka qorraxdu soo baxdo waxa surimi ah waa wax aan maskax lahayn, sida ay noogu tahay in aan ku samayno hilibka doofaarka ama maraqa khudradda leh sausages. Xaqiiqdu waxay tahay in surimi ay ku jiraan cuntooyinka aasaasiga ah ee Japan maalin kasta sida udon ama sushi.
Si gebi ahaanba loo nadiifiyo sirta ku saabsan waxa surimi yahay, dhinacyo muhiim ah ayaa weli ah in wax laga qabto. Tan iyo markii la abuuray surimi qarnigii XNUMXaad, way caddahay in cuntada, hababka iyo tignoolajiyada ay horumariyeen wax badan. Gaar ahaan qarnigii la soo dhaafay, wax-soo-saarka farsamayaqaanku waxa uu siiyay hab lagu faahfaahiyo aad u casrisan iyo iyadoo leh dhammaan dammaanad qaadyada nadaafadda. Si kastaba ha noqotee, Farsamada surimi ee sharraxaadda ayaa ahaanaysa sidii hore ku dhawaad ​​10 qarni ka dib. Si loo helo surimi tayo leh, waa lagama maarmaan in la isticmaalo kalluunka aad u cusub oo isaga ka dooro kan ugu wanaagsan: hilibkiisa. Mid ka mid ah noocyada ugu fiican ee tan waa alaska pollock, kaas oo marka la nadiifiyo dhexda la jarjaro si loo helo borotiinka. Ogaanshaha dhinacyadan ayaa xiiso weyn u leh marka laga jawaabayo waxa surimi ah. Adigoo ka faa'iidaysanaya dhexda kalluunka cusub, surimi waa a bedel weyn cuntadan oo isaga oo kale ah, ku xisaabtan waxtarkaaga.
Ma jiraan wax ama ku dhawaad ​​waxba isma beddeleen, markaa, cuntadan. Waxaan dhahnaa "ku dhawaad" sababtoo ah shuruudaha lagu sameeyay ayaa sidaas sameeyay. Dareenkan, surimi la mid ah kan ku jira
Krissia® waxaa lagu sameeyaa mar walba heerkul hooseeya si loo gaaro tayada ugu sareysa iyo cusboonaanta borotiinka. Si kastaba ha ahaatee, had iyo jeer waa waxtar in la akhriyo macluumaadka nafaqada ka hor inta aanad iibsan wax kasta. Sidan, Krissia® surimi baararka kuma jiraan waxyaalaha lagu ilaaliyo ama midabada macmalka ah sidaas darteed waxay door bidaan daaqsinta si ay dammaanad uga noqdaan badbaadada cuntada. Habkani waxa uu ku jiraa cuntooyinka aasaasiga ah sida caanaha iyo yoghurt iyo waxay noo ogolaanaysaa inaan had iyo jeer gacanta ku hayno surimi qaboojiyahayada.
Surimi iyo borotiin
Iyadoo lagu sameeyay qaybaha ugu fiican kalluunka, surimi waxay leedahay helitaan weyn oo borotiinno ah waxaa ku jira dhammaan asiidhyada amino-yada muhiimka ah oo ay u istaagaan si fudud u milmay iyo dheefshiidka.
Qadarka lagu taliyey ee kalluunka sida ay qabaan khubarada nafaqadu waa inta u dhaxaysa 3 iyo 4 jeer toddobaadkii. Adigoon noqon beddel toos ah balse beddel caafimaad qaba u noqon, oo cunaya surimi waxay caawisaa kordhinta cadadka borotiinka maalinlaha ah Waxayna leedahay faa'iidooyin kale oo isla siman oo muhiim ah. The baararka surimi sidoo kale ka kooban omega 3, qaar ka mid ah asiidhyada dufanka leh ee polyunsaturated ee lagama maarmaanka u ah caafimaadka wadnaha iyo xididdada wanaagsan fitamiin B12, kaliya waxay ku jiraan cuntooyinka asalka ah ee xayawaanka, taasina waxay kaa caawinaysaa yaraynta daalka iyo daalka. Waxyaabaha kale ee ku jira baararka surimi waa kuwa Macdanta sida selenium, oo muhiim u ah shaqada saxda ah ee habdhiska difaaca.
Sidaa darteed, haddii aad jeceshahay inaad si wanaagsan wax u cunto oo aad ka welwelsan tahay cuntadaada, surimi waa xulafo aad u fiican si aad u dhammaystirto oo aad u hodmiso suxuuntaada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Guriga » Waa maxay surimi maxaase ka samaysan?